Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiirada Amniga, Gaashaandhigga iyo Taliyaasha Ciidamada – Kalfadhi
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u yeeray Wasiirada Amniga iyo Gaashaandhigga iyo Taliyaasha hey’adaha ammaanka Soomaaliya, si wax looga weydiiyo amni darrada ka jira magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa lagu wargeliyay Wasiirada Gaashaandhigga iyo Amniga iyo Taliyaashaba in ay si deg deg ah u yimaadaan fadhiga Golaha Shacabka ee Sabtida maadaama uu dalka ku jiro xaalad aad u adag oo dhinaca amaanka ah.
Sidoo kale Xubnaha loo yeeraya waxaa kamid ah Guddoomiyaha Maamulka Gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow waxaana u yeerista Xubnahaan la ogeysiiyay Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre.
Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in kulanka maalinta Sabtida ah looga hadlayo oo kaliya arrimaha amniga, waxaana tani ay ka dambeysay, kaddib markii labaatameeyo Xildhibaan ay soo jeediyeen mooshin lagu dalbanayo in kulanka Baarlamaanka looga hadlo arrimaha amniga.
U yeerista Xubnahaan ayaa ka dambeysay kadib markii ay kordheen Weerarada Al-shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay mudo todobaad gudihiis ah dad ku dhow 100 qof halka in kabadan 100 kalane ay ku dhaawacmayn.
Dadka weerarada Al-shabaab iyo amni darrada Muqdisho ku dhintay waxaa kamid ah Laba Xildhibaan oo katirsanaa Golaha Shacabka oo mid kamid ah ku dhintay Weerarada Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha iyo Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre oo lagu dilay degmada Kaaraan ee Gobalka Banaadir.